I-Ultrasonics Yenza Ukuvuselelwa Kwebhethri Lithium-Ion Kusebenze Kakhulu - I-Hielscher Ultrasound Technology
ILithium iyinto entulekayo futhi ebaluleke kakhulu ekhona kumabhethri asebenza kakhulu, njengamabhethri e-Li-ion. ILithium iyinto ebaluleke kunazo zonke etholakala ekuvuseleleni kabusha ibhethri ye-Li-ion, kodwa futhi namanye amaminerali nezinsimbi ezifana ne-cobalt, i-manganese, i-nickel, ithusi ne-aluminium yizinsimbi ezibalulekile zokululama. I-high-intensity ultrasonication isetshenziswa njenge-high-shear ukuyaluza nenqubo ye-leaching ukukhipha, ukususa, nokuhlakaza amaminerali abalulekile nezinsimbi ezivela kumabhethri asetshenzisiwe. Indlela ye-sonication isebenza kahle kakhulu, yonga amandla, futhi itholakala kalula ukufakwa ezindaweni zokuthengisa kabusha ezihweba ngokugcwele.
Ukubuka konke: Inqubo Yokusebenzisa Kabusha i-Li-Ion-Battery
Izinqubo zokusebenzisa kabusha izinto zingahluka njengoba izinkampani ezisebenza ngokukhiqiza kabusha ibhethri ye-Li-ion zikhula futhi ziguqule izinqubo zazo zisebenze kahle kakhulu. Kodwa-ke, ukuze uphinde uthole izinto ezibalulekile njenge-lithium emabhethri, kudingeka izinyathelo ezilandelayo:
Okokuqala, isembozo sepulasitiki sebhethri siphukile futhi sisuswe. Ngemuva kwalokho, ibhethri elinqunu lifakwa ku-nitrogen ewuketshezi ukuze kunciphise izinto ezisebenzayo, eziqhumayo. Lesi sinyathelo siqinisekisa ukuthi ukukhishwa okungazelelwe kwawo wonke amandla agciniwe nokusha okweqile nokuqhuma okuhambisana nakho kuyavinjelwa.
Ngemuva kwalezi zinyathelo zokulungiselela, ibhethri libe selibekwa ku-lathe, lapho ibhethri livulwa khona ngesaha, ukuze kususwe igobolondo langaphandle. Kwehliselwe phansi emgodini webhethri, i-cathode, i-anode, ne-separator iyakhishwa ibekwe kuhhavini, lapho yomiswe khona ngo-24 h ngo-approx. 60-120 ° C. Ngaphambi kokwelashwa kokukhishwa kwensimbi, ama-electrode angawodwa, okuyi-cathode ne-anode, kufanele ahlukaniswe futhi. Njengoba impahla ye-cathode ivame ukunamathela ku-aluminium foil nge-binder, ejwayelekile i-polyvinylidene fluoride (PVDF) noma i-polytetrafluoroethylene (PTFE), kuwumsebenzi onzima ukususa ucwecwe lwe-cathode ne-aluminium komunye nomunye. Ukwehlukanisa kahle okokusebenza kwe-cathode kusuka kucwecwe, ukwahlukaniswa kwe-ultrasonic kufakazelwe ukuthi kuyindlela yokwelashwa esebenza kahle kakhulu, esheshayo futhi eyonga. Kepha ukuqiniswa kwenqubo ye-ultrasonic akugcini lapha. I-Ultrasonic leaching yezinsimbi namaminerali afana ne-cobalt, i-manganese, i-nickel, ithusi ne-aluminium kukhuthaza ukukhishwa kwensimbi futhi kukhuphule isivuno sezinsimbi ezibuyisiwe.
I-UIP4000hdT – Iprosesa ye-4kW ye-ultrasonic yokusebenzisa kabusha ibhethri kwe-Li-ion
Ama-Ultrasonics Wokubuyiselwa Okusezingeni Elifanele kwe
I-Ultrasonic Cavitation Yokuhlukaniswa kwe-Cathode
I-Ultrasonication yehlukanisa izinto ze-cathode kusuka ku-aluminium foil ngemiphumela ye-acoustic cavitation. I-acoustic noma i-ultrasonic cavitation inqunywa izingcindezi eziphakeme ezenzeka endaweni, amazinga okushisa aphezulu kanye nokwehla kwawo okulandelayo okuholela ekuhlukaneni kwengcindezi kanye nokwehla kwamazinga okushisa kanye nama-micro-turbulences amakhulu kanye nama-micro-jets aphezulu. Lawa mandla okubamba iqhaza athinta imingcele engaphezulu, ikhuthaza ukudluliswa kobuningi futhi ibangele ukuguguleka komhlaba. Idala amandla amakhulu anjalo wemvelo yamakhemikhali, yomzimba, eshisayo neyomshini, i-cavitation ye-ultrasonic idala ukuyaluza okudingekayo nokudluliswa kwesisindo ukuphula isakhiwo se-organic binder esisetshenziswe kumabhethri e-lithium-ion ukulungisa i-cathode ku-collector / aluminium foil.
Ngenkathi ukuxubana kwemishini njengokuvusa kukodwa kunganele ukukhipha impahla ye-cathode ngempumelelo kusuka kucwecwe lwe-aluminium, i-high-intensity ultrasonication inikeza amandla adingekayo we-sonochemical ne-sonomechanical ukususa i-cathode material ngokuphelele kubaqoqi. Ngokuphikisana nokushukumisa okwenziwa ngomshini, i-cavitation ye-ultrasonic idala izivunguvungu ezinkulu, amazinga okushisa aphakeme kakhulu endaweni kanye nezingcindezi kanye nokuxokozela, ukusakaza kanye namajetshi wamanzi, aqhekeza isibopho, isb. ebusweni bobabili, i-cathode ne-Al foil. Ngaleyo ndlela, isibopho esiphakathi kwalezi zinto zombili sonakaliswe kahle futhi i-cathode ne-aluminium foil zehlukaniswe ngempumelelo.
Isibonelo, ukwahlukaniswa kwe-ultrasonic kuholela ekusebenzeni okuphezulu kokususwa kwe-cathode kwe-99% kusetshenziswa i-N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) njenge-solvent ku-70 ° C (amandla we-240 W we-ultrasonic, nesikhathi esingu-90 min sokusebenza kwe-ultrasonic). Njengoba ukwahlukaniswa kwe-cathode ye-ultrasonic kuhlakaza okokusebenza ngokulinganayo futhi kuvimbele ama-agglomerate amakhulu, inqubo yokungena yensimbi elandelayo iyenziwa lula.
I-Ultrasonic Leaching of Minerals
Imiphumela ye-ultrasonic cavitational echazwe ngenhla ikhuthaza ukuvuza kwezinsimbi kusuka kumabhethri asetshenzisiwe, futhi. I-high-intensity ultrasonication ayisetshenziswanga kuphela ukuthola amaminerali ekusetshenzisweni kabusha kwebhethri, kepha futhi isetshenziswa kaningi ku-hydrometallurgy kanye nasekubunjweni kwe-ores okuyigugu (isb. Izinga lokushisa eliphakeme lasendaweni, izingcindezi, kanye namandla okushefa aqinisa ukuqhuma kwensimbi futhi andise ukusebenza kahle kwe-leaching kakhulu. Ngenkathi ezindaweni ezishisayo ezinamakhaza zenzeka endaweni eshisa kakhulu ngokweqile efinyelela ku-1000 K, izimo jikelele zokuvuza zidinga kuphela ukushisa okuncane kwe-approx. 50-60 ° C. Lokhu kwenza ukuthi i-ultrasonic metal alulame amandla futhi yonge.
Ukuvuza kwe-Ultrasonic kwamaminerali kusuka kumabhethri e-Li-ion asetshenzisiwe kubonakala ngamazinga aphezulu wokutakula nokusebenza kahle. Isibonelo, i-sulfuric acid (H2SO4) isetshenziswe ngempumelelo njenge-ejenti ye-leaching lapho kukhona i-hydrogen peroxide (H2O2) ngesikhathi sokuvuselelwa kwamaminerali e-ultrasonic kusuka ku-cathode. I-Ultrasonic leaching ene-sulfuric acid iholele kumazinga wokuthola kabusha we-94.63% we-cobalt, ne-98.62% ye-lithium, ngokulandelana.
I-Ultrasonic leaching ene-organic citric acid (C6H8O7 · H2O) ibangela ukubuyiswa okuphezulu kakhulu kwethusi ne-lithium, kutholakale i-96% yethusi kanye ne-100% ye-lithium evela kumabhethri we-Li-ion asetshenzisiwe.
I-UIP4000hdT, i-4000watts enamandla yezimboni zesheya ephezulu yokugunda ulayini, isb. ukuvuza kwezinsimbi, ukuhlukaniswa kwe-cathode ne-aluminium foil kanye nokukhishwa kwamaminerali kumabhethri e-lithium-ion asetshenzisiwe.
I UIP16000, ama-watts ayi-16,000 anamandla i-homogenizer ye-ultrasonic yokukhipha amaminerali, i-leaching yensimbi nokuhlukaniswa kwe-cathode ekusetshenzisweni kabusha kwebhethri
Izinzuzo ze-Ultrasonic Battery Recycling
Ukusetshenziswa kwe-solvent okuphansi / okungenabuthi
Cishe akukho ukukhishwa kwe-exhaust / CO2 unyawo
Okulula futhi Okuphephile: I-Ultrasonic Scale-up Kusuka Ekuvivinyweni Okungenzeka kuye Ekuvuseleleni Kwezimboni
Imishini ye-ultrasonic esebenza kahle kakhulu yokusebenzisa kabusha ibhethri ye-Li-ion itholakala kalula ngebhentshi-phezulu, umshayeli kanye nokufakwa kwezimboni. Njengoba ukwehlukaniswa kwe-cathode ye-ultrasonic kanye neaching ye-ultrasonic yamaminerali kusuka kumabhethri asetshenzisiwe sekuvele kuyizinqubo ezisetshenziswayo, inqubo evela ekuhlolweni kokuqala, ukwenziwa kahle kwezidingo zenqubo yakho ethize kanye nokufakwa kohlelo olugcwele ngokuphelele lwezimboni kanye / noma uhlelo lwe-leaching luyashesha futhi lulula.
Ama-Ultrasonicators Wokusebenza Okuphezulu Wokusebenzisa Kabusha Ibhethri
I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngama-ultrasonicators asebenza kakhulu kunoma yisiphi isayizi namandla. Nge-UIP16000 (16kW), i-Hielscher ikhiqiza iprosesa le-ultrasonic elinamandla kunawo wonke emhlabeni. I-UIP16000 kanye nazo zonke ezinye izinhlelo zezimboni ze-ultrasonic zingaba ngamaqoqo kalula kumthamo wokucubungula odingekayo. Onke ama-ultrasonicators ama-Hielscher akhelwe ukusebenza kwe-24/7 ngaphansi komthwalo ogcwele nasezindaweni ezifuna kakhulu.
Ama-Ultrasonic Probes nama-Sono-Reactors anoma iyiphi iVolumu
Uhla lomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics lumboza ububanzi obugcwele bama-processor we-ultrasonic kusuka kuma-compact lab ultrasonicators ngaphezulu kwebench-top kanye nezinhlelo zokushayela kumaprosesa asezimboni asebenza ngokugcwele anamandla wokucubungula ukulayisha amaloli ngehora. Uhla oluphelele lomkhiqizo lusivumela ukukunikeza okokusebenza okufaneleke kakhulu kwe-ultrasonic kohlelo lwakho lokusebenza, amandla enqubo nezinhloso zokukhiqiza.
Onke ama-processor we-Hielscher ultrasonic alawulwa kahle futhi ngaleyo ndlela anokwethenjelwa amahhashi omsebenzi ku-R&D nokukhiqizwa. I-amplitude ingenye yezinqubo ezibalulekile zenqubo ezithonya ukusebenza kahle nokusebenza kwe-sonochemically ne-sonomechanically reaction. Zonke Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa avumela ukumiswa okuqondile kwe-amplitude. I-Sonotrodes nezimpondo ze-booster yizinsiza ezivumela ukuguqula ubukhulu endaweni ebanzi kakhulu. Amaprosesa aseHielscher ezimboni ze-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu futhi ahambise amandla adingekayo e-ultrasonic wezicelo ezifunwayo. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7.
Amasethingi we-amplitude aqondile nokuqapha unomphela kwemingcele yenqubo ye-ultrasonic nge-smart software kukunika ithuba lokuhlukanisa i-cathode kusuka ku-aluminium foil kanye nokufaka amaminerali nezinsimbi kumabhethri e-Li-ion asetshenzisiwe ngaphansi kwezimo ezisebenza kahle kakhulu ze-ultrasonic. I-sonication efanelekile yokusebenzisa kabusha ibhethri ye-Li-ion esebenza kahle kakhulu!
Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunayo. Lokhu kwenza imishini ye-ultrasonic ye-Hielscher ithuluzi lomsebenzi elithembekile eligcwalisa izidingo zenqubo yakho yokuphinda usebenzise kabusha.
Ibhethri le-lithium-ion, nebhethri le-Li-ion, luhlobo lwebhethri elishajekayo. Uma kuqhathaniswa namabhethri asuselwa ekuholeni nase-nickel, amadivayisi e-lithium-ion asebenzisa i-cathode, i-anode ne-electrolyte njengomqhubi.
Njengawo wonke amabhethri, amabhethri e-Li-ion agcina amandla wamakhemikhali, aguqulwa abe amandla kagesi ukuze anikeze amandla kagesi amile amandla.
Amabhethri e-lithium-ion ajwayele ukusetshenziselwa i-elektroniki ephathekayo njengama-laptops, amafoni ahlakaniphile kanye nezimoto zikagesi. Ukusetshenziswa kwamabhethri e-Li-ion kuvusa nentshisekelo ekhulayo evela ezinkampanini zamasosha nezasemkhathini.